बाँच्दा एम्बुलेन्स आएन, म’रेपछि डोजरमा बोकेर रा`प्ती किनारमा गा’डियो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/बाँच्दा एम्बुलेन्स आएन, म’रेपछि डोजरमा बोकेर रा`प्ती किनारमा गा’डियो !!
काठमाडौं,कोरोना भाइरसबाट नेपालमा मृ’ त्यु भएका दोस्रो व्यक्ति बाँके`को नरैनापुर गाउँपालिका-५ नयाँ बस्तीका २५ वर्षीय युवकको श’ व डोजरमा बोकेर अन्तिम सं’स्कार गरिएको छ। कोरोनाभाइ`रसको संक्र`मणबाट आइतबार बिहान मृ’त्यु भएका ती युवकको श’व राति साढे ९ बजेतिर राप्ती किनारमा लगेर गा’डिएको हो। श’व व्यवस्था`पन गर्न गएका ७ जना सबैले सुर`क्षित स्वास्थ्य सामग्री लगाएका थिए।
नेपाली सेना, सश`स्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य कर्मी श’ व व्यवस्थापन गर्न गएका थिए। स्रोतका अनुसार कोरोना`भाइर`सबाट कसैको ज्या’ न गए कसरी श’व व्यवस्थापन गर्ने भनेर बाँके`मा टिम बनिसकेको थिएन।‘अप`र्झट ती युवाको मृ’ त्यु भएपछि प्रक्रिया पूरा नगरी एउटा टिम बनाएर श’व व्यवस्थापन गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो। भगवान`पुरको क्वारेन्टिन खुल्ला ठाउँ र राप्ती नदीको किनारमा भएको हुँदा डोजरबाटै उठाएर श’व लैजान सजिलो भएको थियो।
सुरूमा दीपेन्द्र प्रावि भगवानपुरको क्वारेन्टिनबाट झन्डै साढे २ सय मिटर टाढा दक्षिणतर्फ श’व गा’ड्न खोजिएको थियो। तर गाउँलेहरूले जो’खिम हुने भन्दै त्यहाँ श’व गा’ड्न दिएनन्। त्यसपछि थप एक किलोमिटर जति टाढा राप्ती नदीको किनारमा लगेर श’व गा’डिएको नरैनापुर गाउँपालिका- ५ का वडाध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्यले जानकारी दिए।
नरैनापुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य उपसंयोजक नागेन्द्र साहले करिब ९ बजेतिर श’व गा’डेर सकिएको जानकारी दिए। ‘डोजरले पहिलै गएर श ’व गा’ड्ने खाडल खनेर तयार पार्‍यो, अनि ब’केटमा बोकेर लगेर खाडलमा हा’ल्यो,’ साहले भने ‘मानिस कोही पनि नजिक जानु परेन।’ क्वारेन्टिनवाट मृ’ तक युवाको श ’व सवा ८ बजेतिर डोजरले बोकेर लगेको उनले बताए। त्यसपूर्वक नै मृ’तकको शवलाई स्वास्थ्य कर्मीले प्ला`ष्टिकले र्‍या’प गरिसकेका थिए। श’व व्यवस्थापनमा संलग्न नरैनापुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानबहादुर बिसीले ७ फिट गहिरो खा’डल खनेर श’व गाडिएको बताए।
’शव उठा`उनुपूर्व र श’व गा’डेर आएपछि पनि ती युवा म’रेको दीपेन्द्र प्रावि भग`वानपुरको क्वारेन्टिनमा औ’षधी छर्किएको प्रहरी निरीक्षक बिसीले बताए। श’व उठाउनु भन्दा पहिला नै नरै`नापुर गाउँ पालिका-५ दीपेन्द्र प्रावि भगवानपुरको क्वारे`न्टिन पुरै खाली गरिएको थियो। भगवा`नपुर क्वारेन्टिनमा बसेका थप ३८ जनालाई आइतबार ती युवाको श’व उठाउनुभन्दा पहिला नै वडा नम्बर ६ स्थित जय किसान माविको क्वारेन्टिनमा स्था’न्तरण गरिएको छ। भगवानपुरबाट जयकिसान माविको क्वारेन्टिन लगभग ५देखि ७ सय मिटरको दूरीमा छ। सेतो पाटि मिडिया
आइतबार बाट काठमा`डौंका सरकारी कार्याल`य सञ्चा`लन हुने !!!
सुखद खबर – आफै कमजोर हुन सक्छ कोरोना भाइरस, छिट्टै हराउन सक्छ
पहिलो पटक गोर्खा भर्ती रोकियो !!
सरकारले कर नलगाउने हो भने प्रेट्रोल ४३ रुपैयाँ प्रतिलिटर बेच्न सकिन्छ : निगम